Archive du 20170706
Fitaovan’ny TIM Norobain’ny mpitandro ny filaminana
Omaly alarobia tamin’ny 8 ora alina latsaka fahefany no tonga teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny mpitandro ny filaminana nirongo fitaovam-piadiana nanaisotra ny afisy lehibe sy ny fitaovana rehetra efa tafapetraky ny Antoko Tiako I Madagasikara hoenti-manamarika ny faha-15 taona nijoroany.
TIM Atsimo Andrefana “1 er tour dia lany Ravalomanana”
Nambaran’ny mpandrindra ny REG TIM any Atsimo Andrefana, Atoa Sazalahy Tsianihy fa manamafy ny tsy maintsy hahatanteraka ny 1 er Tour dia vita ny fifidianana hahalany ny filoha Ravalomanana amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena hotanterahina amin’ny taona 2018.
Hery Rajaonarimampianina Efa vonona handositra ?
Tsy mahatombona firy eto amin’ny Madagasikara intsony ny filoham-pirenena tato ho ato, fa toa mandosindositra sy tsy te hiatrika ny sedra politika eto amin’ny firenena. Mafampana rahateo ny raharaha politika eto an-tanindrazana, ka aleony mitsoatsoaka any ivelany aloha.
Mpiasan’ny fadin-tseranana Tsy azo terena amin’ny zony, hoy ny Sempidou
Na izahay aza, hoy ny filohan’ny sendikan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana (Sempidou), Andrianavalona Herizo, tsy manery ireo mpiasan’ny fadin-tseranana rehefa tsy te hitokona izy ireo.
Maitre OLALA “Tsy rariny ny fanakanana ny TIM”
Nanao izao ny HVM tany Toliara maninona no navela nanao, hoy ny mpisolovava Willy Razafinjatovo manoloana ny tsy famelana ny Antoko Tiako I Madagasikara hanao hetsika eny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ho fanamarihana ny faha-15 taona nijoroany ?
Mpianatry ny ESCAME Nanampy ny Boriborintany I nanadio tanàna
Nanampy ny Boriborintany I nanadio tanàna ny mpianatry ny sekoly ambony ESCAME omaly. Ho valin’ny fanentanana nataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mikasika ny tokony handraisan’ny tsirairay andraikitra amin’ny fanadiovana ny tanàna no anton’izany.
Kaominina Andranomanelatra Hazaina ny alika mirenireny
Taorian’ny fisiana alika mirenireny izay nanaikitra olona ary maty avy eo ny 21 jona teo tao amin’ny kaominina ambanivohitra Andranomanelatra dia miroso amin’ny fihazana sy famonoana
Hangarahara rahoviana ?
Tsy azo atao eto izany ny mandraki-peo rehefa tsy nahazoana alalana na dia hitadiavana ny marina momba ny heloka iray mahatohintohina ny fiainam-bahoaka sy hisorohana izay fanetriben’ny firenena aza.
Fifamoivoizana eto an-drenivohitra Novelomina ireo “Marquage au sol”
Novelomin’ny kaominina Antananarivo ireo mari-pamantarana mandry amin’ny arabe na « Marquage au sol » sasantsasany eo anivon’ny fari-piadidiana ny tanànan’Antananarivo mba hanamorana ny fandaminana ny fifamoivoizana.
Grevin’ny fadin-tseranana Mila vahan’ny fanjakana haingana, hoy ny SIM
Mila vahan’ny fanjakana haingana ny olan’ny fadin-tseranana eto Madagasikara, hoy ny filohan’ny SIM (Syndicat des Industries de Madagascar) Fredy Rajaonera. Asa maro mantsy no miato vokatr’io fitokonan’ny mpiasan’ny ladoany io.
Salon RSE Hanampy ireo orinasa amin’ny fandrosoana
Hotanterahina eto amintsika ny 12 sy ny 13 jolay ho avy izao indray ny andiany faharoa amin’ilay Salon RSE na andraikitra ara-piarahamonin’ny orinasa sy ny fanapahan-kevitra momba ny fampandrosoana maharitra, karakarain’ny UR-CSR Consulting.
Akanin’ny marenina 67 HA 80 % ny salam-pahafaham-panadinana CEPE
Tafakatra 80 % ny salam-pahafaham-panadinana CEPE tamin’ity taona ity ho an’ny Akanin’ny Marenina etsy 67 ha raha 50 % tamin’ny taon-dasa.
Handray anjara mavitrika amin’ny fankalazana ny fanamarihan’ny antoko TIM miaraka amin’ny filoha Marc Ravalomanana eny Mahamasina amin’ny sabotsy 8 jolay izao ny KOMTIM